မလည်မရူပ်မလေး – Grab Love Story
`ခွေးတွေ.. ရှင်တို့ … ခွေးတွေသိလား´ `အငုံ´ ငယ်သံပါအောင်ကြုံးအော်ပြစ်လိုက်သော အသံလေးက တိုက်ကြီးအတွင်း ဗုံးပေါက်ကွဲသလို မြည်ဟီးသွားလေသည်။ အငုံမေမေ၊ ပွင့်က ခပ်ဝေးဝေးရောက်နေသော ထမီကို ကယောင်ကတမ်းဆွဲယူပြီး ခြေမှစွပ်ဝတ်ခါ၊ ပြေကျနေသော ဆံပင်ကို ကပိုကရို ထုံးဖွဲ့သည်။ နို့နှစ်လုံးအပေါ်သို့ အလိပ်လိုက်လေးတက်နေသော ဘရာစီယာကို အတင်းဆွဲချပြီး အုံကြီးထွားကြိုင်းသော နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ဖုံးဖီကာကွယ်သည်။ ဦးဦးသံဒိုင်က ပုဆိုးကို ကောက်ဝတ်ပြီး တံခါးဝသို့ သုတ်ခြေတင်ရန်ခြေလှမ်းပြင်လိုက်သည်။ `လူယုတ်မာကြီး.. ရှင်ပြသနာတတ်သွားချင်လား. ထိုင်စမ်း.. ဘယ်မှမသွားနဲ့´ ခြောက်ပေးနီးပါးထွားကြိုင်းသော ကိုသံဒိုင်က (၁၆)နှစ်သမီးလေးအငုံ၏ အဆိုကို လေးစာရိုကျိုးစွာ လိုကနာရှာသည်။ `အကုန်.. စောက်ရှက်ကွဲကုန်မယ်´ အငုံက နာဇီဟစ်တလာမျက်နှာဖြင့် ဟိန်းဟောက်သည်။ ပွင့်က ရှက်လွန်း၍ မျက်နှာကို လက်ဝါးနှစ်ဖက်ဖြင့်အုပ်ခါ တရှုံရှုံငိုနေရှာသည်။ `ကြည့်ပါအုံးရှင်.. ဒါ.. ဧည့်ခန်းရှင့်.. ဧည့်ခန်း.. ကျမဒက်ဒီ.. ဂုဏ်သရေရှိ ဧည့်သည်တွေကို လက်ခံတွေ့ဆုံတဲ့.. မင်္ဂလာရှိတဲ့ ဧည့်ခန်း သိကြရဲ့လား´ အငုံ့စကားသံသာ ထွက်ပေါ်နေပြီး လူကြီးနှစ်ယောက်စလုံးထံမှ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေကြသည်။ `ကျမ အံ့အောတယ်.. ဦးဦးသံဒိုင်၊ ဒက်ဒီဆုံးတာ နှစ်လပဲရှိသောတာပါ၊ ရှင်တို့ဒီလောက် သောင်းကျန်းကြဘို့ မကောင်းဘူး´ ပွင့်ရော ကိုသံဒိုင်ပါ ခေါင်းငုံ့ဆိတ်ငြိမ်နေ၏။ `ပြီးတော့ ခင်ဗျားကြီး သဒေါင်းစားဘ၀နဲ့ ကြံတောသင်္ချိုင်းမှာ နေရတဲ့ဘ၀ကကယ်တင်လာတဲ့ ဒက်ဒီမှက်နှာကိုမှမထောက်မထား ခင်ဗျားမို့ဗျာ´ `ဦးဦးအပြစ်တွေချည်းပါအငုံ´ `ဟုတ်တယ်၊ မာမီလဲပါတယ်.. မာမီဘာဖြစ်လို့ ရာဂပြင်းထန်းသွားရတာလဲဟင်´ `အငုံ..´ ပွင့်အသံက နီရဲသောမျက်လုံးတွေကြားမှ ရှက်ဒေါသနှင့် ကန်ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ `နားထောင်နေလို့ အကောင်းအမှတ်နဲ့အငုံ.. ဒါလူကြီးတွေကိစ္စ.. ဒို့နှစ်ယောက်ယူကြမှာဘဲ.. လင်မယားလိုနေတာဆန်းသလား´ `ရှင်.. မေမေ.. အဲ.. အဲဒါ.. မေမေပါးစပ်က ထွက်.. ထွက်လာတဲ့စကားတွေ.. ဟုတ်လား´ အငုံအံ့အောသလို ၀မ်းလည်းနည်း ရှက်ဒေါသလည်း ပိုမိုပြင်းထန်သွားသည်။ `ဟုတ်တယ်.. င့ါပါးစပ်ကပြောတာ ဘာဖြစ်လဲ´ မဟုတ်ပါ.. မဖြစ်နိုင်ပါ။ မေမေသည် ယဉ်ကျေးသော လူ့အလွှာမှ နူးညံ့စွာ မွေးဖွားသန့်စင်လာသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း အငုံသိသည်။ ဒက်ဒီရှိစဉ်က ဒက်ဒီမှလွဲ၍ ဘယ်ယောက်ျားကိုမှ တစ်ဦးချင်း လက်ခံစကားပြောခဲ့သူ မဟုတ်ပေ။ မြန်မာဆန်ဆန်၊ နန်းဟန်နွဲ့နွဲ့နှင့်မေမေ့ပါးစပ်မှ မောက်မာရိုင်းစိုင်းသော စကားလုံးတွေက ဘယ်အချင်းအရာကို အခြေခံပေါက်ဖွားခဲ့သည်ကို အငုံမတွေးတတ်အောင်ဖြစ်သွားပါသည်။ `လင်သေလို့ နောက်တစ်ယောက်ထပ်ယူတာ ဘာဖြစ်လဲ၊ နင်က လူတွင်ကျယ်ဝင်လုပ်နဲ့အငုံ၊ လာ.. ကိုသံဒိုင် အပေါ်ထပ်သွားမယ်´ ပွင့်က ကိုသံဒိုင်လက်ကို ရဲတင်းစွားဆွဲပြီး အပေါ်ထပ်လှေခါးသို့တက်သွားသည်။ ကိုသံဒိုင်က အငုံကို တစ်စုံတစ်ရာပြောလိုက်ရန်လှည့်ကြည်၏။ `မေမေ.. သမီးကို.. စစ်ကြေငြာတယ်´ `ရပါတယ်.. မေမေ.. အငုံကလဲ.. ဘာကောင်မလဲဆိုတာ.. အကြောင်းပြရသေးတာပေ့ါ´ `အံမာ.. ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်..ဟင်း´ `လှေခါးအောင်သို့ပြန်ဆင်းလာဟန် ခြေလှမ်းပြင်လိုက်သော ပွင့်လက်မောင်းလေးကို ကိုသံဒိုင်က ဖမ်းဆွဲပြီး အပေါ်ထပ်သို့ ချော့မော့ခေါ်ဆောင်သွားလေသည်။ `ထွီ.. ကြက်သရေမဲ့လိုက်တာ´ ပွင့်ကြားလောက်အောင် အော်ပြောလိုက်သေးတာမို့ ပွင့်အရက်တန်ခိုးနှင့် ရာဂ ကာမ သတ္တိတို့က သမီးလေးကို ရိုက်ပုတ်ရန် အောက်ထပ်ပြန်ဆင်းဟန်ပြုပြန်လေသည်။
`ခလေးပဲ ပွင့်ရယ်၊ နောက်တော့ သူနားလည်လာမှာပါ.. ကိုယ်က လူကြီးပဲ´ `သက်သက်လာဖြဲတာ.. ကိုသံဒိုင် ဒါကိုလူကြီးက ငုံ့ခံနေရင် ဒင်းပိုကဲလာမှာ´ `အေးအေး ဆေးဆေး ဖြေရှင်စမ်းပါ ပွင့်ရယ်´ ပွင့်ကမူးဝေ၀ဦးနှောက်ဖြင့် အတန်ငယ်တွေနေပြီး `အရက်ထပ်သောက်အုံးမယ် ကိုသံဒိုင်´ `တော်ပါတော့ ပွင့်ရယ်၊ အခုလဲ အရက်ကြောင့်ပဲ ကိုယ်တို့နှစ်ယောက် လွန်လွန်ကျူးကျူးတွေ ဖြစ်ကုန်တာပဲ မဟုတ်လား´ `အင်းလေ ထပ်သောက်မယ်လေ၊ ပြီးတော့ ထပ်ပြီး ကျူးကျူးလွန်လွန်ချစ်ကြမယ်ဟင်း.. မကောင်းဘူးလား… အာမယ်.. မျက်နှာကြီးက ဘာလဲ တချီထဲနဲ့ အီသွားပလား ဆရာကြီး ခစ်.. ခစ်.. ခစ် အို ကြည့်ပါအုံး.. ဟင်းး.. ဟင်း.. မာလိုက်တာမှ `တောင်´လို့´ ပွင့်က လက်ရဲ ဇက်ရဲလေး ကိုသံဒိုင်ပေါင်ကြားသို့ လက်ထိုးနှိုက်ခါ တခစ်ခစ်ရယ်ရင်း ပြော၏။ ပွင့်မူးနေပြန်ပြီ။ ကိုသံဒိုင် ဘာတစ်ခွန်းမှဆက်ပြောတော့ဘဲ တကယ်ကြင်နာသနားသောစိတ်ဖြင့် ရင်ခွင်ထဲသို့ ဆွဲယူပွေ့ဖက်ထားရင်း ကျောပြင်လေးကို တယုတယ်ပွတ်သပ်ပေးရင်း ချော့မော့နှစ်သိမ့်လိုက်ရသည်။ `ချစ်ကြအုံးစို့ ကိုယ်ရယ်နော် မဝသေးဘူး´ `အေးပါ ပွင့်ရယ် အားပြည့်သွားအောင် အိပ်လိုက်အုံးလေ နော် နော်လို့´ `ဟင့်အင်း.. ဟင့်အင်း.. တစ်ခါ တစ်ခါ´ `ပွင့် သိပ်ပင်ပန်းနေမှာစိုးလို့ပါ´ `ကိုယ့်အတွက်ဆို ပွင့်ကအဲဗားပဲ.. သိလား´ `အင်း… အင်း.. ကဲ.. အိပ်အုံး ဟုတ်လား´ `ဟေ့အေးကွာ.. တစ်ခါလောက်ချစ်ပြီးမှ မောမောနဲ့အိပ်ချင်တယ်.. နော်.. နော်လို့..ကို´ ပွင့်ကအရှိန်မသေသေးသော ကာမစိတ်ဖြင့် ထမီလေးကိုချွတ်လိုက်ပြီး ကုတင်ပေါ်၌ လေးဘက်လေးထောက်ခါ ဖင်ကြီးကုန်းပေးလိုက်ပြန်သည်။ `လာကွယ်.. ဒီက.. ရှက်တောင်လာပြီ´ ဟယ် တတ်နိုင်ပါဘူး၊ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်တော့ဟု သဘောပိုက်ခါ ကိုသံဒိုင်လည်း ပုဆိုးကို ခေါင်းပေါ်မှ ကျော်ချွတ်ပြီး ခြင်ထောင်အမိုးပေါ် ပစ်တင်ပြီး ပွင့်ကုန်းပေးထားသော ဖင်ဖွေးဖွေးကြီးကြားမှ အစွမ်းကုန် ပြူးထွက်နေသော ပွင့်ယောနိအုံကြီးကြားသို့ မဲနက်ချိပ်မှောင်နေသော သူ့လီးတန်းကြီးကို ထပ်မှာတေ့ပြီး ဇွတ် ခနဲ့ လိုးထည့်ပေးလိုက်တော့၏။ စိတ်ချဉ်ပေါက်နေသော မျက်နှာလေးနှင့် ထာဝစဉ်တင်းမားနေတတ်သော အငုံမျက်နှာကို ကိုသံဒိုင်ရင်မဆိုင်ရဲသလို ခံစားနေရသည်။ ခေးလဘက်မှအပြစ်မရှိဟု ကိုသံဒိုင်ထင်သည်။ ခလေးပြောသလိုပင် မိမိသဒေါင်းစားဘ၀က အငတ်ငတ်အပြတ်ပြတ်ရှိနေစဉ် ခေါ်ယူကျွေးမွေးထားခဲ့သော ခလေးဒက်ဒီ ကိုမောင်မောင်လွင်သာ သေသည့်နေရာမှထလာလျှင် ကိုသံဒိုင်ကို ခြောက်ပေးတွင်းထဲသို့ မလွဲမသွေထည့်လိုက်မည်မှာ ဧကန်။ `မင်းစားဘို့ ၀တ်ဘို့ နေဖို့မပူရတာနဲ့ပဲ ယောက်ျားတစ်ယောက်အဘို့ ပြည့်စုံပြီယူဆထားသလား..သံဒိုင် ဟင်း.. ဟင်း.. ဟင်း..´ `မင်း.. ဆော်မချချင်ဘူးလား ကဲရော့.. မင်းချချင်ရင် ခေါ်ချ ငွေယူထား´ ဘာမှ လိုလေသေးမရှိအောင် ထားပေးခဲ့သော မောင်မောင်လွင့်ကျေးဇူးက မဟာပထဝီမြေကြီးထက် ထုထည်ပမာဏကြီးမားလွန်းသေးသည်။ `ပွင့်´၏ ကာမကွန်ယက်အတွင်းမှ ရုန်းမရအောင် နစ်ကျွံနေသော မိမိအဖြစ်ကိုလည်း စင်စစ် ကိုသံဒိုင် ကိုယ်တိုင်မကျေနပ်။ `ကို´ပွင့်နဲ့ နေရတာ မပျော်ဘူးလားဟင်´ `အင်း´ ပျော်ပါတယ်ပွင့်ရယ်. ဒါပေမဲ့ ကျေးဇူးရှင်မျက်နှာကို ပြန်မြင်မိရင် အပျော်စိတ်ကလေးတွေ ပျောက်ပျက်လွင့်ပျယ်ကိုန်တယ် ကိုယ့်ဖာသာလဲ လိပ်ပြာမသန့်သလိုပဲ ပွင့်´ `အို ကိုကလဲ ကိုပွင့်ကို အတင်းအဓမ္မ မုဒိန်းကျင့်ပြီး ယူခဲ့တာမှ မဟုတ်တာ၊ ဟောဒီ ပွင့်ကိုယ်တိုင်က ကို့ကို တစ်ဖက်သတ်စွဲလန်းခဲ့ရတာ´ `ဘာရယ်.. ဘယ်လို ပွင့်´ `ဟင်း.. ဟင်း.. ကို ဘယ်သိမလဲ၊ ကိုမောင်မောင်လွင်ရှိစဉ်က ကိုလေ မှတ်မိသေးလား ဟိုသစ်ခွရုံ အိပ်ခန်းလေးထဲမှာ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ဖြုတ်နေတုန်း ပွင့်ရောက်သွားခဲ့တယ်။ ကောင်မလေးခမျာ ကြေးစားမလေးသာဆိုတယ် ကို့ဟာကြီးဒဏ်ကို မခံနိုင်လို့ ည၀က်နဲ့ ပြန်ပြေးသွားခဲ့တယ်မို့လား´ `ဟင်.. ပွင့်ဒါတွေသိတယ်´ `သိရုံတင်မဟုတ်ဘူး၊ မြင်လဲမြင်တယ်..သိလား အဲဒီအခါမှာ မျက်စိထဲ စွဲကျန်နေခဲ့တာက ဘာလဲ သိလား´ `ဟင့်အင်း´ `ဒါကြီးပေ့ါ.. ဟောဒါကြီး´ နှစ်ကိုယ်ယှဉ်တွဲအိပ်နေသည်မို့ ပွင့်လက်ကလေးက ခပ်လုံးလုံး မပျော့မမာ ကိုသံဒိုင် လိင်တန်ရှည်ကြီးကို `ပိကျိ. ပိကျိ´နှင့် မြည်တတ်သော ဗူဖောင်းလေးနှိပ်သလို ဆိုပ်ကိုင်ညစ်ရင်း ပြောသည်။ `အဲဒီကတည်းက ကို့အလိုးကို ခံချင်နေတာရှင့် ကဲ သိပလား ကိုဒစ်ပြုတ်ကြီးရဲ့ ခစ်.. ခစ်´ တစ်ခါတလေ ပွင့်ထံမှကြားသောစကားများမှာ ပွင့်ဆိုသော သူဌေးကတော် မုဆိုးမလေး ပြောနေတာမှ ဟုတ်ရဲ့လားဟုပင် သံသယ၀င်စရာကောင်းလောက်အောင် ပြစ်ပြစ်နှစ်နှစ် တစ်တစ်ခွခွရှိ၏။ ပွင့် စိတ်ပါလက်ပါ ပါးချင်ကပ်ပြီး ပြောတတ်သော ကာမစပ်ယှက်ခြင်း အကြောင်းလေးများကြောင့်လဲပဲ ကိုသံဒိုင်၏ `ဒုတ်´ကြီးမှာ အမြဲ `တင်း´နေတတ်၏ `စိတ်ညစ်တယ်.. ပွင့်ရယ်´ `ရှင်.. ဘာဖြစ်လို့လဲ ကိုရယ်´ `ကိုယ့်ဟာကြီးက အမြဲတောင်နေတာ ဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးကွယ်´ `ကို လုပ်ချင် လုပ်လေ´ `လုပ်ရလွန်းလို့လဲ အချောင်းကြီးက ကြွက်သားတွေလဲ နာနေပြီပွင့်ရဲ့ ပွင့်ရော´ ပွင့် ရုတ်တရက် မဖြေဘဲ သက်ပြင်းရှိုက်၏။
`ပွင့်လဲလေ စိတ်ရှိတိုင်းလုပ်နေရလို့လားမသိဘူး ဖင်တစ်ခုလုံးလဲ ကျိန်းစပ်နေတာ ကိုရဲ့´ `ဖင် ဟုတ်လား ဖင်က ဘာဖြစ်လို့ကျိန်းတာလဲ´ `အာကွာ ကိုကလဲ နားဝေးလိုက်တာ ဖင်ဆိုတာက ကိုလိုးလိုးနေတဲ့ ပွင့် စောက်ပတ်ကိုပြောတာ ရှေ့ဖင် ရှေ့ဖင် ကဲသိပလား´ `အော်´ `အင်း.. အဲဒီလို အဆီတထပ် အသားတထပ်ပြောပြမှ သဘောပေါက်တယ်မို့လား အဲဒီတော့လဲ ပွင့်ကပေါ်တင်ချည်းပဲပြော ပြောနေတော့ ကိုယ့်ဟာကြီးက ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ပျော့တော့မှာလဲ လို့´ မည်သို့ဆိုစေ ပွင့်မျက်နှာလေးနှင့် နှစ်လက်မလောက်သာခွာပြီး အိပ်ယာထဲ၌ လီးနှင့်စောက်ပတ်အကြောင်း ပြောနေရသော အချိန်လေးများသာလျှင် ကိုသံဒိုင်အတွက် သုခချမ်းသာ အိမ်ထောင်ရေးအရသာကို ရပေတော့မည်။ တစ်ခါကလည်း အငုံနှင့် သူ ပက်ပင်းတိုးဘူးသည်။ ထမင်းဝိုင်းမှ ပွင့်က စောစီးစွာ စားသောက်ပြီး ထသွားစဉ် အငုံလေး ၀င်လာသည်။ စကဒ်တိုတိုနှင့် ချိုင်းပြတ်စွပ်ကျယ်ပျော့လေးအောက်မှ မစို့မပို့နို့လေးနှစ်လုံးက ၀င့်ဝင့်ထည်ထည်ခေါင်းလေး ပြူနေသည်။ ထမင်းချက်အိမ်ဖော်ကုလားမလေး ခရစ္စတီးနားက ထမင်းဝိုင်းဘေးနားမှာရပ်လျက် လိုအပ်သည်ကို ဖြည့်ပေးနေသည်။ အငုံက ကိုသံဒိုင်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်မှ ၀င်ထိုင်သည်။ ရေချိုးပြီး အလှပင်မပြင်ထား။ ရေစိုပါးလေးနှစ်ဖက်က မို့ဖောင်းနေ၏။ အငုံက ကိုသံဒိုင့်ကို အသာအကဲခပ်သည်။ ထို့နောက်စားပွဲအလယ်တွင် အသင့်ပြင်ထားသော အချိုပွဲအတွင်းမှ သီးမွှေးငှက်ပျောသီးအလုံးထွားထွားကြီး တစ်လုံးကို ကောက်ယူပြီး အခွံမနွှာသေးဘဲ လှည့်ပတ်ကြည့်ရင်း ပုခုံးလေးနှစ်ဖက်ကို ကြက်သီထဟန် တွန့်ပစ်လိုက်ပြီး ခစ်ကနဲ့ ရယ်လိုက်သည်။ `ဘာလဲဟင် မမလေး´ `အော်.. ငှက်ပျောသီးကြီးမြင်ပြီး သတိရသွားလို့ပါ ခရစ္စတီးနားရဲ့ ခစ်ခစ်´ ပြောပြောဆိုဆို ငှက်ပျောသီးကြီးကို ပါးစပ်ထဲသွင်းလိုက် ထုတ်လိုက်လုပ်ရင်း ကိုသံဒိုင်ကို ခနဲ့သော သရော်သောအကြည့်နှင့် မျက်လုံးဝိုင်းလေးကို လှည့်ကြည့်နေပြန်သည်။ အငုံကပါးစပ်ထဲသို့ ငှက်ပျောသီးကြီး ထည့်သွင်းကာ အသံမြည်အောင် တပြွတ်ပြွတ်စုပ်ပြရင်း ခရစ္စတီးကို နောက်ပြောင်သလိုနှင့် ကိုသံဒိုင်အား ပေါ်တင်ကြီး တိုက်ခိုက်နေလေသည်။ ကိုသံဒိုင် စိတ်တွေကသောင်းကနင်းဖြစ်လာကာ ထမင်းကို လက်စသပ်ပြီး စားပွဲမှထခဲ့ရသည်။ သည်တုန်းက အောင်ပွဲရစစ်သူကြီးပမာ အငုံလေးက လက်ခုပ်လက်ဝါးလေး တီးကာ အားရပါးရအော်ရယ်ခဲ့လေသည်။ `ဦးဦးပထွေး´ `ဗျာ..´ `အငုံခေါ်တာမှန်ပါတယ်နော်´ သံဒိုင် အကြပ်အတည်းနှင့် ရင်ဆိုင်ရပြန်သည်။ `ပြောလေ မှန်တယ်မို့လာ´ `ခလေးရယ်´ `ယောက်ျားလိုပဲပြောပါ မချွဲပါနဲ့´ `မချွဲပါဘူး သမီးလေးရယ် သမီးလေးက ဦးကိုသိပ်မုန်းနေတယ်ဆိုရင်လဲ ဒီအိမ်ကြီးက ဦးထွက်သွားပေးပါ့မယ် သမီးရယ်´ `အိုး သိပ်ဂွတ်တာပေ့ါ´ ထွက်သွားလေအဟင်း ဘာလို့မထွက်သွားသေးတာလဲ ဘာလဲ မအေကိုအီလို့ ၀လို့ သမီးကိုပါကစ်ဖို့ကြံနေတာလားဟင်´ `အငုံ´ သည်တစ်ချီ သီးသီးထန်ထန်ပေါက်ကွဲရသူက ကိုသံဒိုင်ပဲဖြစ်တော့သည်။ သူ့အသားတွေတဆတ်ဆတ် တုန်နေကြသည်။ မျက်လုံးအိမ်မှ အပူငွေ့တွေလျှံထွက်လာပြီး မျက်ရည်များရစ်ဝဲကုန်သည်။ `ဦးကိုမုန်းပါ မောင်းထုတ်ပါ သမီး´ `ဦး အချိန်မရွေး ဒီအိမ်ကထွက်သွားမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလောက်အထိ ယုတ်မာပက်စက် ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲ့တဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့တော့ ဘ၀မှာ အရိပ်မကျန်ချင်ဘူး အငုံ´ `အားပါးပါး ဒိုင်တွေကတော့ အကယ်ဒမီပဲ´ အငုံက လှပသော နှုတ်ခမ်းလေးအစုံကို မဲ့မဲ့လေးလုပ်ရင် စက်ဆုပ်ရွံရှာသော အကြည့်နှင့် ကိုသံဒိုင်ကို ကြည်၏။ `ကဲ ဒါဖြင့်သမီးမေးမယ် ဦးမှန်မှန်ဖြေ´ သံဒိုင်က လှိုင်းထလှုပ်ရှားနေသော ရင်အစုံနှင့် ဟင်းလင်းပြင်နံရံကို ဒေါသတကြီး ဖြိုဖျက်ပြီး ဖြစ်တော့မည့်ဟန်နှင့် စူးရှစွာကြည့်နေဆဲ။ `ဆိုပါတော့ ခုလို မာမီမရှိတုံး သမီးကဦးကို ဟိုဥစ္စာ အဲအကူအညီတောင်းမယ်ဆိုပါတော့ ဦးကူညီနိုင်မှာပါ´ `ငါ တတ်နိုင်တဲ့ အကူအညီမျိုးဆို အငုံအတွက် အစွမ်းကုန် ဖြည့်ဆည်းပေးဘို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးသားပါ အငုံ´ `အိုကေ တကယ်နော်´ `ငါယောက်ျားတစ်ယောက်ပါ´ `ကဲ ဒါဖြင့်ခဏ လိုက်ခဲ့´ `ဘယ်ကိုလဲ´ `လိုက်ခဲ့လေ သိရမှာပေ့ါ´ အငုံက ပေါ်ထပ် လက်ဝဲဒေါင့်ဆုံ၌ရှိသော သူမအခန်းထဲသို့ သံဒိုင်ကို ခေါ်သွား၏။ အငုံအခန်းလေးထဲမှာ ကြီးမားတုတ်ခိုင်သော ကပ္ပလီကြီးများ ဗလာကိုယ်ထီးနှင့် ကြွက်သားများ အပြိုင်းပြိုင်း ထုတ်ကာ ကာယအလှပြနေသောပုံများ အစီအရီချိတ်ဆွဲထားသည်။ အခန်းထဲရောက်သည်နှင့် အငုံက အခန်းတံခါးကို ကလစ်ကနဲ့ ပိတ်လိုက်သည်။ `အငုံ နင် ဘာ ဘာလုပ်မလို့လဲ ဟင်´ `ဦးပဲ သမီးကို ကူညီမယ်ဆို´ `ငါ ငါ ဘာကူညီရမှာလဲ အငုံ´ `ဟင်း ဟင်း ယောက်ျားစကားပါနော်´ အငုံက အိစက်တင်းမောက်သော တင်ပါးကြီးအစုံ လှုပ်ရမ်းရင်း ကုတင်ဆီလျှောက်သွားကာ အေးဆေးစွာ လှဲချလိုက်ပြီး ထမီလေးကို ဖြေးဖြေးချင်း ပင့်လှန်လိုက်လေသည်။ နုနယ်ပျိုမျစ်သော မိန်းကလေး တစ်ဦး၏ ပေါင်တန်ဝင်းဝင်းကြီးများက သံဒိုင်ဆိုသော လူထွားကြီးအား ဖယောင်းတစ်ခုပမာ ပျော့တွဲလာစေသည်။ ထမီအောက်စလေးက ပေါင်ရင်းဂွဆုံ မှောင်မိုက်ဆုံးနေရာလေးမှာ ခေတ္တရပ်နားနေသည်။ သံဒိုင် ရင်များ တဒိုင်းဒိုင်းတုံခါနေသည်။ ခြေတွေ လက်တွေ အေးစက်လာသလိုပင် ရပ်ထားသော ဒူးတွေ ညွတ်ကျလာသည်။
အငုံက သံဒိုင်ဖြစ်အင်ကိုကြည့်ကာ ပြုံစိစိလေးလုပ်ရင်း။ `လာလေ ဦးရဲ့ ဟင်းဟင်း လာပါ´ သံဒိုင်နဖူးမှ ချွေးသီးများ စီးကျလာသည်။ မှောင်ရ်ိပ်ကျသော ပေါင်ကြားမှ ခပ်ရေးရေးအကွဲတစ်တစ်ကြီး နှစ်ခုကို မြင်နေရပြီ။ `လာလေ ဦးလေးကလဲ ဟင်း ဟင်း အငုံခလေးမှ မဟုတ်တော့တာနော် ဟုတ်တယ်နော်´ အငုံလက်ကလေးတစ်ချောင်းက အကွဲတစ်တစ်ကြီးကြားသို့ အလျားလိုက် ထိုးဆွပွတ်သပ်လိုက်၏။ သံဒိုင် ဦးနှောက်တွေဆူဝေ အုံကြွလာသည်။ ဒီ ခလေးမ ဘယ်သို့စိတ်ကူပေါက်လေသနည်း ဟုပင် သံဒိုင်ကြီး မစဉ်းစားအားပါ။ လီးအချောင်းတစ်ခုလုံး ကာမဆန္ဒနှိုးဆွမှုကြောင့်ကျင်လာသည်။ အောင့်လာသည်။ လက်တစ်ဖက်က လီးတန်းကြီးကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကြီး ဆုပ်ကိုင်ထားမိနေသည်။ အငုံ ဒုတိယအဆင့်အဖြစ် ထမီကိုလုံးဝပင့်လှန်လိုက်လေရာ နုစို စိမ်းမှောင်နေသော စောက်မွှေးအဖုတ်လိုက်ကလေးကို `ဘွား´ကနဲ့ တွေ့လိုက်ရပြီး အမေနှင့်သမီးနည်းဗျူဟာချင်း တထပ်တည်းပါလားဟု သံဒိုင်တွေးမိလိုက်သည်။ သံဒိုင်ခြေလှမ်းတို့ စတင်ရွေ့လျားလာ၏။ ပုဆိုးကို ချွတ်ပြစ်လိုက်သည်။ ပုဆိုးဂွင်းစနှင့် ချိတ်ပြီးမှ လီးတန်ကြီးက အပြင်ဆို့ `ထောင်း´ကနဲ့ ကန်ထွက်လာသည်။ အငုံမျက်လုံးလေးအစုံက ထကြွ သောင်းကျန်းနေသော ကိုသံဒိုင်၏လီးတန်ကြီးကို ကြည့်မိ၏။ မာမီ စွဲမည်ဆိုလည်း စွဲလန်းလောက်သည့် လီးကြီးပါတကားဟု တွေးမိသည်။ လီးအရင်းပိုင်းမှ အုံဖွကြွကာ ဖောင်းထနေသော လမွေးများက အရောင်တွေမွဲစပြုနေသာ အမွေးအုံကြီးအတွင်းမှ ဦးမော့လျက် ဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းထွက်နေသော လီးတန်းကြီးမှာ မြွေနဂါးကြီးတစ်ကောင်ပမာ ရှည်လျားကြီးမားပြီး အလုံးအထည်က အသဲယားစဖွယ် တုတ်ခိုင်သန်စွမ်းလွန်းလှပေသည်။ ငေါက်ခနဲ့ ငေါက်ခနဲ့ ပါးပြင်ထောင်ကာ တွေ့ကရာကို ရန်မူတော့မည့် မြွေဟောက်ကြီး တစ်ကောင်အလားလဲ မဲနက်ပြောင်တင်းကာ ထိတ်လန့်စဖွယ်ဖြစ်၏။
`ဦးဦး လီးကြီးက အကြီးကြီးပဲနော်´ ခလေးမလေးက ကတုံကရီအသံလေးနှင့်ဆို၏။ `ဒါကြီးနဲ့ မေမေ့ကိုလုပ်တာ မအော်ဘူးလားဟင် ဦး´ `ပထမတော့ အော်တာပေ့ါသမီးရဲ့ နောက်ကျတော့လဲ သမီးအမေအပေါက် ကျယ်သွားပြီး ခံနိုင်သွားတာပေ့ါ´ စကားပြောဖော်ရလာသော ကိုသံဒိုင်မျက်နှာကို အငုံကျေနပ်စွာကြည့်ရင်းပြုံးပြလိုက်သည်။ သံဒိုင်က အငုံစောက်ပတ်ဖောင်းဖောင်းမို့မို့ကြီးကို စုပ်ပေးယက်ပေးရန် မျက်နှာကြီးကိုငုံ့လိုက်၏။ `ဖျန်း.. ဖျောင်း.. ဖျောင်း… အွန့်´ ပထမ အငုံဆတ်ကနဲ့ထထိုင်လိုက်၏။ လက်တစ်ဖက်က သံဒိုင်ပါးကို ဘယ်ညာအစုံတွဲလုံးနှင့် ရိုက်ပြစ်လိုက်သည်။ ညာခြေဖနောင့်ဖြင့် ရင်ဝကို ဆောင့်ကန်ပြစ်လိုက်ကာ ကုတင်ပေါ်မှ တစ်ပတ်လှိမ့်ဆင်းသွားကာ တစ်ဖက်တွင်ခါးထောက်ရပ်လိုက်သည်။ `ကိုင်း မှတ်ပလား ဟင်´ ရင်ဝမှ အောင့်သက်နာကျင်သော ဝေဒနာထက် ရှက်ခြင်း၊ ဒေါသဖြစ်ခြင်းက ဟုတ်ကနဲ့ ပေါက်ကွဲ၏ `ဟင် နင့်ပညာအကုန်ပဲလား ခွေးမ´ သံဒိုင်က ဘီလူးသဘက်တစ်ကောင်ပမာ ကုတင်ကိုကျော်ပြီး အငုံ့ကို ခုန်အုပ်လိုက်သည်။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော အငုံက ကုတင်ကိုပတ်ပြီးပြေးကာ တံခါးဖွင့်ပြီး တဒုံးဒုံးပြေးဆင်းသွား၏။ သံဒိုင် ကတုံကရီကြီးကျန်ရစ်သည်။ မလောက်လေးမလောက်စားလေး၏ ပညာသာပါပါလှည့်စားခံလိုက်ရခြင်း ဖြစ်သည်။ အငုံ၏ ဦးသံဒိုင်အပေါ် အရှက်ကွဲဖြစ်သော ပထမစစ်ပွဲဖြစ်သည်။ ဒုတိယစစ်ပွဲမှာ နောက်သုံးလခန့်ကြာပြီး `ပွင့်´တစ်ယောက် မေမြို့သို့ ခရီးထွက်သော အခါဖြစ်လေသည်။ ကိုသံဒိုင်က အနာကြီးနာက အရှက်ကြီးရှက်ခဲ့သော ပထမပွဲစဉ်ကို ပြန်လည်ချေပနိုင်ရေး အတွက် စစ်မကြေငြာဘဲ ဒလကြမ်းတိုက်ခိုက်ခဲ့သော ပွဲစဉ်လည်းဖြစ်သည်။ ထမင်းချက် ခရစ္စတီးကုလားမလေးက ထုံးစံအတိုင်း ညနေ(၅)နာရီခွဲသည်နှင့် အိမ်ပြန်ရန်ပြင်ဆင်နေစဉ် ထမင်းထားခန်းထဲသို့ ဦးသံဒိုင်ဝင်လာ၏။ `နင့် မမလေးရော ခရစ္စတီး´ `ရေချိုးနေတယ် အန်ကယ်´ `င့ါကို အမြီးတစ်ပွဲလောက် ပေးစမ်းပါအုံး´ `ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့´ ခရစ္စတီး ခပ်ပျာပျာ ထွက်သွားပြီး မီးဖိုထဲ၌ အားလူကြော်ကာ ပန်းကန်ပြားသေးသေးနှင့် ယူလာ၏။ `ခရစ္စတီး´ `ရှင်.. အန်ကယ်´ `နင် ယောက်ျားယူဘူးလား.. ဟင်´ ခရစ္စတီးမှာ ကိုသံဒိုင်မျက်နှာကို အကဲခပ်သလိုကြည့်၏။ `ဟုတ်ကဲ့ တစ်ယောက်ယူဖူးတယ်။
`ဘာဖြစ်လို့မပေါင်းတာလဲ.. မကောင်းဘူးလား´ `အင်း သူက အားကြီး အရက်သောက်တယ်.. အန်ကယ်´ `အော် ကျန်တာတော့ အဆင်ပြေလားဟင်´ `အင်း စီးပွားရေး´ `စီးပွားရေးမဟုတ်ပါဘူး ငါပြောတာ လင်မယားလိုအိပ်တဲ့အခါမှာ အဆင်ပြေလားလို့´ `ဟင့်အင်း မပြေဘူး´ ကုလားမလေး ခေါင်းငုံ့သွားပြီး တိုးတိုးပြော၏။ `ဘာဖြစ်လိုမပြေရတာလဲကွာ.. ကဲ.. ဆိုပါအုံး´ သံဒိုင်က သမရိုးကျ အိမ်ထောင်ရေးဆွေးနွေးခန်းဖွင့်သလို တည်ငြိမ်သောမျက်နှာဖြင့် အိနြေ္ဒမပျက် အာလူးကြော်စားလိုက် အရက်သောက်လိုက်လုပ်နေ၏။ `ကျမ ခလေးမမွေးလို့တဲ့ အန်ကယ်ရယ်´ `ဟ အဲဒါ ပြသနာအခြေခံပဲ ခရစ္စတီးရဲ့´ တစ်ခါမျှ စကားဆယ်လုံးမပြည့်ပဲ ဆေးဖော်ကြောဖက်မလုပ်ခဲသော သူဌေးက သူ့ကို အရေးတယူ စကားတွေပြောနေခြင်းအတွက် ခရစ္စတီး အိမ်ပြန်ဖို့ပင် မေ့သွားလေသည်။ `ကျမ နားမလည်ဘူး အန်ကယ်´ `ဒီနားလာ ငါပြောပြမယ် လာပါဟ နင့်ကိုငါက ကိုက်မစားပါဘူး ဒီမှ မှတ်ထား ကလေးရအောင် ကိုယ်ကလုပ်တတ်ရတယ် ဟ သိလား´ `ကျမ မှ မသိတာ´ ခရစ္စတီးက ခေါင်းလေးငုံ့သွားပြန်ကာ အသံတုံတုံနှင့် ပြောသည်။ ကိုသံဒိုင်က ရေချိုးခန်းဖက်သို့ တစ်ချက်ငဲ့စောင်းကြည့်လိုက်ပြီး။ `နင် ငါပြောသလို လက်တွေ့စမ်းကြည့်မလား´ `ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ´ ခရစ္စတီးက ကိုသံဒိုင်ကို သံသယမျက်လုံးနှင့်ကြည့်ပြီး အသံလေးတွေတုံခါလာရှာသည်။ `လာ ဒီနားမှာထိုင် ငါကနင့်ကိုသနားလို့ပြတာ ဘယ်သူမှ လျှောက်မပြောနဲ့နော်´ `ဟုတ်ကဲ့ပါ အန်ကယ်´ ကိုသံဒိုင်ထိုင်နေသော ကုလားထိုင်ကို စားပွဲနှင့်ညီအောင် ဆွဲလှည့်ပြီး ပြင်ထိုင်ကာ သူ့ပုဆိုးကို အသာအယာဆွဲမတင်လိုက်သည်။ ထာဝစဉ်မတ်တင်း တောင်ထနေသောလီးတန်ကြီးက တွင်းအောင်နေရာမှ ဘွားကနဲ့ ထွက်လာသည်။ `ဟင် အန်ကယ်ကလဲ´ ကုလားမလေးက အလန့်တကြား နောက်ဆုတ်လိုက်သည်။ `ဒီမှာ ဒါကို ဒစ်လို့ခေါ်တယ် ကိုင်ကြည့် ကိုင်ကြည့်စမ်း တွေ့လား ပျော့မလိုလိုနဲ့မာပြီး တောင်နေတာပဲ ထိုင်းစမ်းပါဟ သေသေချာချာ ကြည့်စမ်းပါ´ ကုလားမလေးလက်ကိုဆွဲပြီး အတင်းထိုင်ခိုင်း၏။ အသားဖြူသော မဂိုကုလားမလေးမျက်နှာက နီရဲတွတ်နေပြီ။ `ကိုင် ဒီနားကို ရဲရဲတင်းတင်းကိုင်စမ်း´ ခရစ္စတီးက စိတ်ညှို့ခံရသူပမာ ကိုသံဒိုင်၏ မဲနက်နေသော လီးတန်ကြီးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်စုံကိုင်ကာ ကြည့်နေသည်။ ရုတ်တရက် ရေချိုးခန်းတံခါးပွင့်သွားသည်။ ခရစ္စတီးလန့်ပြီး လီးကြီးကို လွှတ်ချလိုက်ခါ ထမင်းစားခန်းထဲမှ လှစ်ခနဲ့ ထွက်ပြေးတော့သည်။ အငုံက ထမီရင်လျားလေးဖြင့် ကိုသံဒိုင်ကို အကြာကြီး စိုက်ကြည့်နေပြီး မျက်နှာလေးကို အရုပ်ဆိုးအောင်မဲ့ပြစ်လိုက်ပြီး `ထွီ ကုလားမတောင်မထားဘူး´ ဟုပြောရင်း ထမင်းစားခန်းကိုဖြတ်ကျော်ကာ အပေါ်ထပ်သို့ တတ်သွားလေသည်။
တုံနေသောရင်ကို ငြိမ်းအေးစေရန် မှန်တင်ခုံလေးပေါ်တွင် အသင့်တင်ထားသော သံပုရာရည် ဖန်ခွက်လေးကို ကောက်ယူပြီး မော့ချပြစ်လိုက်မိ၏။ စင်စစ် ဦးသံဒိုင်အား မုန်းတီရွံရှာစေကာမူ တရာတွင် တစ်ယောက်ရှိခဲလှသော ကြီးမားတုတ်ခိုင် ရှည်လျားလှသော လီးတန်ကြီးကတော့ အငုံ့မျက်စေ့ထဲမကမထွက်။ ဦးသံဒိုင်က မိမိကိုလိုးနေသည်ဟုပင် အိပ်မက်မက်ခဲ့ပေါင်းလဲ မရေမတွက်နိုင်တော့။ `လူယုတ်မာကြီး ထမင်းချက်တောင် ချမ်းသာမပေးဘူးး ဖြစ်နေတာကြာပြီလား မသိဘူး´ ကုတင်ပေါ်လှဲချရင်း ဆက်တွေးနေမိ၏။ အင်္ကျီပင်မ၀တ်ရသေး ခေါင်းတွေ ဝေနောက်ကျိလာသည်။ `ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ မူးလိုက်တာ´ အငုံနားထင်လေးနှစ်ဖက်ကို လက်မနှင့်ဖိထောက်ပေးရင် မျက်နှာလေးရှုံ့တွသွားသည်။ ထိုစဉ် ကိုသံဒိုင် အခန်းထဲဝင်လာသည်။ `ဟင် ခင်ဗျားကြီး ဘာလာလုပ်တာလဲ´ အိပ်ယာပေါ်မှ ဆက်ကနဲ့အထက ခေါင်းထဲက ဒိုင်းကနဲ့မူးဝေသွားကာ အိပ်ယာပေါ်ပြန်လဲကျသွားရသည်။ မှုံရီဝေသီသော မြင်ကွင်းထဲ၌ ဦးသံဒိုင် ကုတင်ပေါ်သို့ ဒူးထောက်တက်လာသည်ကို မြင်နေရသည်။ အထိတ်တလန့်ကြုံးအော်လိုက်သောလည်း အသံတို့က ထွက်မလာချေ။ ခြေလက်တွေ လေးလံတုံ့ဆိုင်းကုန်သည်။ အငုံလှစ်ခနဲ့တွေးလိုက်မိသည်။ မှန်တင်ခုံပေါ်မှ သံပုရာရေခွက်သည် သံပုရာရည်မဖြစ်နိုင် မူးယစ်ဆေး တစ်စုံတစ်ရာခပ်ထားသော အရည်သာဖြစ်မည်။ ခြုံခိုတိုက်ခိုက်လာသော ဦးသံဒိုင်၏ ထိုးစစ်ကို အငုံရှောင်တိမ်းဆုတ်ခွာချိန်မရလိုက်တော့။ နှုတ်ခမ်းလေးကို ပြတ်လုမတတ်ကိုက်ထားရင် မူးဝေနောက်ကျိနေသည့်ကြာမှ မျက်ရည်တို့တွင်တွင်စီးကျလာ၏။ `ကျားကို မကစားရဘူး ခလေးရဲ့´ ရာဂသံ သြသြကြီးဖြင့် ဦးသံဒိုင်ကလဲ့စားခြေဟန်ပြောရင်း အငုံ့နှုတ်ခန်းလေးကို စွေးကနဲ့စုပ်ယူ၏။ ရင်လျားထားသော ထမီအောက်မှ လုံးတစ်မို့ဖောင်းနေသော နို့အုံဆူဆူလေးအစုံကို သူ့လက်ကြမ်းကြမ်းဖြင့် အုပ်ကိုင်လိုက်သည့်ခဏ အငုံ့တစ်ကိုယ်လုံးတုန်ခါသွား၏။ ဖျဉ်းဖျဉ်း ဖျဉ်းဖျဉ်းနှင့် ကြက်သီးတွေထသွား၏။ အ၀တ်မဲ့သော ခန္ဓာကိုယ်အပိုင်းက ပုခုံးသာလုံးလုံးဝင်းမွတ်မွတ်လေးများကို လျှာကြီးဖြင့်ယက်သည်။ ရေစိုပါးပြင်လေးကို ယက်သည်။ လည်တိုင်ကျော့ကျော့လေးကိုယက်သည်။ နွေးကနဲ့ နွေးကနဲ့ ယားကျိကျိဝေဒနာများ နေရာအနှံ့အပြားမှ တစစ်စစ်လှုပ်ရှားထွက်ပေါ်လာကြ၏။ လက်ကောက်ဝတ်နှစ်ဖက်ကို ပူး၍ ခေါင်းစီးဇာပုပါးအရှည်လေးနှင့် တုတ်ချီကာ ကုတင်တိုင်ကိုစွဲထားလိုက်သောအခါ လက်ကလေးနှစ်ဖက်က ခေါင်းကိုကျော်၍ လှုပ်မရ လှည့်မရ ချည်နှောင်ခြင်းခံနေရ၏။ `နုနုထွတ်ထွတ်ကလေးကိုတော့ ဟဲဟဲဟဲ မင်းအမေလို ဒါရိုက်ကြီး မလိုးပါဘူးကွယ် ခံချင်လာအောင် နူးပေးနှပ်ပေးအုံးမှာပါ ခလေးရဲ့ ဟဲဟဲ´ အငုံ ချွေးသီးလေးများစို့လာကာ တဆတ်ဆတ်တုံနေသော နှုတ်ခန်းနှစ်လွှာကို ပုလဲသွယ်ပမာ ညီညာဖြူဝင်းသော သွားလေးများဖြင့် ဖိကိုက်ထားရှာသည်။ `ဘယ့်နှယ့်လဲ ခလေးမ.. ဟင်၊ မင်းက ကျုပ်ကို မိန်းမပညာပြပြီး ကျူးကျော်ရန်စတာပါနော ဟင်းဟင်း.. အေးလေ သန့်ရှင်းနေတဲ့ င့ါစိတ်ကို မင်းကရိုက်ပုတ်နိုးဆွပေးလိုက်တာ မဟုတ်လား။ င့ါအပြစ် မရှိပါဘူး နော ဟား ဟား ဟား´ ဦးသံဒိုင်အသံက ထောင်ခြောက်တွင်မိနေသောသားကောင်ကို တုတ်နှင့်ထိုးကာလှောင်ပြောင် နေသူကဲ့သို့ အူလှိုက်သဲလှိုက်နိုင်လှသည်။ ကြမ်းထော်သော ဦးသံဒိုင်လက်ဝါးကြီးက ဆီးခု့စောက်မွှေးလေးများကို အုပ်ကိုင်းလူးပွတ်ပြီး အတွင်းပိုင်း ဆင်ခြေလျောထဲ ထိုးဆင်းသွား၏။ `သွားပြီ´ ဟု အငုံ စိတ်လျော့လိုက်သည်။
မာကျောသောလက်တစ်ချောင်းက စောက်စိလေးကို ရစ်ဝိုက်ထိုးမွှေသည် ပြီးမှ အကွဲစပ်ကြားအတိုင်း အောက်ခြေသို့ ပွတ်ခါရွေ့လားသွားသည်။ `အိုး အိုး… အင်း ဟင်း ဟင်း ဟင်း´ အငုံလက်နှစ်ဖက်က ကြိုးချီထားသဖြင့် လှုပ်လေနာလေဖြစ်နေသလို့ ခြေနှစ်ဖက်ကိုပဲအားယူကာ တွန်းကန်လှုပ်ရှားသည်။ စောက်ပတ်အ၀ အတွင်းနှုတ်ခမ်းအနုလေးများကို လက်ထိပ်ဖြင့် ဝိုင်းကာ ဝိုက်ကာ ပွတ်သပ်နေပြန်သောအခါ စိတ်တင်းထားသည့်ကြားမှ စောက်ရေတွေက ရွဲရွဲစိုအောင် စိမ်ကျလာသည်။ ထမီကို တင်ပါးလေးပွေ့ချီပြီး ခြေထောက်မှ ဆွဲထုတ်ပြစ်လိုက်သောအခါတွင်ကား အငုံတစ်ကိုယ်လုံးမှာ အ၀တ်ဗလာနှင့် ရေဆေးငါးကြီးပမာ ၀တ်လစ်စလစ်ဖြစ်သွားလေသည်။ ဦးသံဒိုင်အသက်ရှုသံကြီးက ရေစိမ်နေသော ကျွဲသိုးကြီးတစ်ကောင်ကဲ့သို့ `ရှုးကနဲ့ နှာမှုတ်သံကြီးမှာ ခြောက်ခြားဖွယ်ကောင်းလှသည်။ နို့လေးနှစ်လုံးကြားမှ ဖောက်ကနဲ့ ဖောက်ကနဲ့ ခုန်နေသာ ရင်ညွန့်လေးမှာ မြန်ဆန်နေသည်။ မောလျနေဟန်လည်းရှိသည်။ ဦးသံဒိုင်က စောက်ပတ်အ၀တွင်သာ ရစ်ဝိုက်လှည့်မွှေပေးနေသော လက်ချောင်းကြီးကို သူ့ပါးစပ်ထဲပြန်ငုံကာ တံတွေးဆွတ်ပြီး အတွင်းပိုင်းသို့ ဖြေးညှင်းစွာ ထိုးသွင်း၏။ လက်အထိအတွေ့အားဖြင့် အခေါင်းပေါက်လေးမှာ သေးငယ်ကျဉ်းမြောင်းလွန်းနေသည်ကို တွေ့ရ၏။ မူလအပေါက်အတိုင်းသာဆိုလျှင် ခလေးမလေး ခံနိုင်မည်မဟုတ်ချေ။ ထို့ကြောင့် မှန်တင်ခုံပေါ်တွင် အသင့်တွေ့ရသော အုန်းဆီပုလင်းကိုလှမ်းယူပြီး စောက်ပတ်အတွင်းသားနှုတ်ခမ်းနှင့် လီးတန်တစ်ချောင်းလုံးကို ခပ်ရွဲရွဲလေးသုတ်ပြီး ပုလင်းကိုပြန်ထားလိုက်သည်။ `ဦးက သမီးကို ဆီဆွတ်ပြီးလိုးပေးမှာပါကွဲ့ မနာစေရပါဘူး နော… ဟဲ ဟဲ´ ယုတ်မာခြင်းတစ်ဖက်ကမ်းတိုင်အောင် ဆိုးညစ်သောအကျင့်စရိုက်က ဦးသံဒိုင်တစ်ကိုယ်လုံးကို မကောင်းဆိုးဝါးများကဲ့သို့ ပူးဝင်ကပ်နေပြီဖြစ်လေသည်။ `ကျမ.. ကြောက်တယ်´ အားယူပြီး ခပ်မှေးမှေးပြောလိုက်သော အငုံ့အသံလေးက တုံရီအက်ကွဲစွား တစ်လုံးချင်းထွက်လာ၏။ `မင်း.. အလိုးမခံဖူးသေးဘူးမို့လား´ `ဟင့်.. အင်း´ `အေး.. ဦးက သမီးမနာအောင်ဦးရဲ့ ဧရာမလီးကြီးနဲ့ အပေါက်ချဲ့ပေးမှာကွဲ့ သိလား ဘာမှ ကြောက်စရာမရှိဘူး´ `ဟင့်အင်း.. ဟင့်အင်း´ အငုံက ခေါင်းလေးကို ဘယ်ညာရမ်းခါးပြီး ခါးခါးသီးသီးလေးငြင်းဆန်နေရှာ၏။ ဦးသံဒိုင်က မကြာခဏ ထောင်ထောင်ကြွလာသော ခလေးမလေး၏ ဒူးခေါင်းနှစ်ဖက်ကို တင်းတင်းဆုပ်ပြီး ဆွဲဖြဲလိုက်ရာ။ `အာ.. အဟင့်.. မလုပ်ပါနဲ့.. အဟင့်´ `ငြိမ်ငြိမ်နေစမ်း.. အသားမနာချင်နဲ့´ ရာဂဘီလူး နတ်ဆိုးပူးနေပြီဖြစ်သော ဦးသံဒိုင်က ဒူးနှစ်လုံးကြားသို့ ဒူးထောက်လျက်ရွေ့လျားကာ နေရာယူလိုက်ပြီး ရှည်လျားမဲနက်ခါအကြောတွေ အပြိုင်းပြိုင်းနှင့် ကြောက်မက်ဖွယ်လီးကြီးကို အရင်းမှစုကိုင်၍ နှိပ်ယူလျက် တစ်မာသောလီးထိပ်ဖူးကြီးကို အငုံလေး၏ အပျိုစင်စောက်ပတ်လေးအ၀သို့ တေ့သွင်းလိုက်၏။ `ဗြိ.. ပြလစ်… ပြွတ်´ `အီး…. အ…..´ ခလေးမလေး၏ မှေးစင်းနေသော မျက်လုံးလေး ရုတ်တရက်ပြူးလန်သွားရှာ၏။ ပါးစပ်လေးဟပြီး အသက်ရှုရပ်သွား၏။ အသက်ကိုအောင့် အစ်ထားသဖြင့် လည်တိုင်ဘေးမှ သွေးကြောစိမ်းစိမ်းလေးများ ဖောင်းကားလာကြသည်။ `သမီး.. အသက်အောင့်မထားနဲ့လေ လျှော့ချလိုက် လျှော့ချလိုက်´ ဦးသံဒိုင်က ကျွတ်ထွက်မတတ်ပြူးထွက်လာသော ခလေးမလေးမျက်လုံးအစုံကြောင့် ရုတ်တရက်လန့်သွားပြီး လီးကိုရှေ့ဆက်မလိုးဘဲ ရပ်ထားလိုက်ရလေသည်။ `ဟင်း…´ ရှည်လျားစွာ မှုတ်ထုတ်လိုက်လော သက်ပြင်းရှည်ကြီးနှင့်အတူ အငုံဇက်ကလေး တစ်ဖက်စောင်းကျသွားပြီး ခေတ္တငြိမ်သွား၏။
`အငုံ.. အငုံ… သမီးလေး….. အငုံ´ ဦးသံဒိုင် မယားပါသမီးလေး အငုံကိုမေးဖျားလေးလှုပ်ရပ်ပြစ်ပြီး ဆက်ခါဆက်ခါခေါ်သည်။ `ကြိုးဖြေပေးပါ မရုန်းတော့ပါဘူး ဦးရယ်´ ညောင်နာနာ အားပျော့သံလေးကြောင့် ဦးသံဒိုင်က ကုတင်တိုင်နှင့်ပူးချီထားသော အငုံလက်ကလေးနှစ်ဖက်ကို ဖြေပေးလိုက်သည်။ `ကြပ်တယ်.. တအားပဲ.. ဦးရယ်´ `သမီးအပေါက်က ကျဉ်းနေသေးလို့ပါ´ `သမီးမခံနိုင်ဘူး.. နာတယ်.. ကျွတ်ကျွတ်´ `ဆီဆွတ်ထားတယ်သမီးရယ် မနားပါဘူး´ `နာပါတယ်ဆို.. အဟင့်.. အဟင့်´ ဦးသံဒိုင်က အငုံ့ပါးပြင်လေးကို ငုံ့န်းလိုက်ရင်း မသိမသာလေးလိုးထည့်လိုက်ပြန်သည်။ `ပြွတ်ဗြစ်.. ဘွပ်´ `အား.. နာတယ်.. နာတယ်… မခံနိုင်ဘူး´ အငုံလက်ကလေးနှစ်ဖက်က ရင်ဘက်မွှေးများ ထူထဲစွာပေါက်နေသော ဦးသံဒိုင်ရင်ဘတ်ကြီးကို အလန့်တကြားလေး တွန်းထားလိုက်ရှာသည်။ `ပြွတ်´ကနဲ့ အသံတစ်သံထပ်ထွက်လာ၏။ `အာ.. ဒုက္ခပဲ အတင်းထိုးမသွင်းနဲ့လေ´ `ပြွတ်… ပြွတ်… ဘွပ်´ `အား… အားး… သေပြီ… သေပြီ… အမေ… အမေရေ…´ `အမေ့လင်ကြီးက သမီးကို အတင်းလိုးနေတယ်အမေ့´ `ပြွတ်… စွတ်… ပြွတ်… ဘွပ်´ `ဗြစ်… ဒုတ်…´ `အား…. ´ စူးစူးရှရှအော်လိုက်သောအငုံအသံလေးက အခန်းကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲ ဆူညံသွားလေသည်။ ဇတ်ဇတ်.. ဇတ်ဇတ်.. ဖြင့် အဆိပ်လူးမြှားထိထားသော သမင်ပျိုမလေးနှယ် တစ်ကိုယ်လုံး တုံခါနေရှာသည်။ သေးငယ်ကျဉ်းကြပ်သော စောက်ခေါင်းလေးထဲ၌ တစ်ဆို့ဆို့ကြီး တပ်လျက်ကြီးဝင်းနေသော ဦးသံဒိုင်၏လိင်တန်ကြီးမှာမူ သားရေကွင်းနှင့် ပတ်ရစ်ထားသည့်အလား သိပ်ဝင်နေပြီး လီးအရေခွံများက စောက်ပတ်ဝ၌ ရစ်ပြုံနေကြသည်။ တင်းကျစ်သော စောက်ပတ်သေးသေးလေး၏ ညှစ်အားကြောင့် ဦးသံဒိုင်မှာ အရသာအတွေ့ကြီးတွေ့နေပြီး အငုံ့မျက်နှာရှုံ့မဲ့တွန့်လိမ်နေရှာသည်ကိုပင် ဂရုမစိုက်နိုင်ဘဲ အားနှင့်ဖိသိပ် စိုက်တွန်းချလိုက်၏။ `ဘွပ်… ဗြွတ်.. ဖေါက်´ `သေ… ပါ…ပြီရှင်´ သည်တစ်ခါအသံကတော့ တိမ်ဝင်နစ်မြုပ်ကာ ပျောက်ကွယ်သွား၏။ စောက်ခေါင်းအတွင်းမှ ခေါင်းကြောမာလွန်းသော အပျိုစင်ခံတပ်အပျိုမှေးလေးက လီးထိပ်ကြီးကို တွန်းကန်ထားရာမှ စုတ်ပြဲသွားခြင်း ဖြစ်သည်။ တစ်ပြိုင်တည်းတွင် စအိုနှင့် ဆက်သွယ်နေသော သေးကြောင့်ဖွင်ကွဲလေးအစပ်မှ ပါးလှပ်သော အရေပြားလေးမှာ ဖတ်ကနဲ့ကွဲသွားသည်မှာမူ နှစ်လက်မခန့် ပြဲထွက်ရှည်လျားသွားသည်။ ထိုနာကျင်သော ဝေဒနာများနောက်မှ ပြည့်ဝစုံလင်သော ကာမဓာတ်အားဗို့ပြင်းပြင်းက ကပ်ပါလာလေရာ အငုံ့ဖင်ကြီးမှာ ကြွတက်သွား၏။ `အဆုံးဝင်လားဟင်.. သမီး´ `အင်း…´ အငုံက ခေါင်းကလေး မသိမသာငြိမ့်ပြ၏။ လက်ကလေးနှစ်ဖက်က ဦးသံဒိုင်၏ အမွှေးအမျှင်ထူသော လက်ဖျံမာကြောကြောကြီးကို အားပြုထားဆဲ။ `သမီး ခြေနှစ်ချောင်းကို ကားထားလိုက်.. အင်း.. ဟုတ်ပီ´ ဦးသံဒိုင်က အငုံခြေနှစ်ချောင်းကို ခါးပေါ်ခွတင်ပြီး ဖင်ကြီးကို ရှေ့သို့စိုက်တွန်းလိုက်၏။ `ဗြစ်တစ်… ဗြစ်တစ်.. ဗြစ်တစ်..´ `အင့်.. အင့်… အင့်´ တစ်ချက်ဆောင့်လိုက်တိုင်း အငုံခေါင်းလေးက မော့မော့ပြီး လန်လန်သွားရှာသည်။
နှုတ်ခန်းလေးကို ကိုက်ထားပြီး ပါးရိုးလေးများထောင်နေအောင် အံကို တင်းတင်ကြိတ်ထားရှာသည်။ `ဗြွတ်.. ဘွပ်.. ပြွတ်ဘွပ်… ပြွတ်ဘွပ်´ `အင့်အင်.. အင့်အင်.. အင့်အင်´ တစ်ချက်ဆို ဆိုသလောက်အသားပါသော ဆောင့်ချက်ကြီးတွေကြောင့် အငုံဆိုသော ခလေးမလေး၏ နို့နှစ်လုံးမှာ တုံခါလျက်ရှိပြီး ဖင်ကြားမှ သွေးများစီးကျနေသည်ကိုပင် မသိရှာပါချေ။ `ကိုမောင်မောင်လွင်ဆုံးတာ ကျုပ်မသိလိုက်ဖူး၊ စိတ်မကောင်းလိုက်တာ ပွင့်ရယ်´ `ကံကြမ္မာပဲပေ့ါ ဒေါက်တာရယ်.. အဲ ဒါကြောင့် သူနဲ့ရခဲ့တဲ့ ကိုယ်ဝန်ကိုလဲ သံယောဇဉ်မထားချင်လို့ ဒေါက်တာဆီလာခဲ့တာပါ´ `ဟာ မလုပ်ကောင်းပါဘူး ပွင့်ရယ်၊ ဒါတော့ ကျုပ်လုပ်မပေးနိုင်ဘူး ကျုပ်အသပြာဆရာဝန်မှမဟုတ်တာ ပွင့် သိပါတယ်။´ `ဟုတ်ပါတယ်ရှင် ဒီပြင်ဆေးခန်းတွေမှာဆိုရင် ပွင့်သိက္ခာကို ထိခိုက်နိုင်လို့ပါ ဒေါက်တာ´ ဒေါက်တာ မစ္စတာဘေဆင်က မျက်မှန်ကိုချွတ်ပြီး လက်ကိုင်ပုဝါနှင့် သုတ်လိုက်ပြီးမှ ပွင့်ကို အသေအချာပြန်ကြည့်သည်။ မစ္စတာဘေဆင်ဆိုသည်က မြန်မာဆရာဝန်တစ်ယောက်မဟုတ်သလို လူကသော အမ်-ဘီ-ဘီ-အက်စ် ဆရာဝန်တစ်ယောက်လဲ မဟုတ်ပေး၊ တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုသ ဆရာဝန်ဘွဲကို အင်္ဂလန်မှာနေစဉ်တုန်းကတည်းက ရယူခဲ့သူဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်၌ `အပ်ပုန်း´ခေါ် ဒေါက်တာရမ်းကု တစ်ယောက်သာလျှင်ဖြစ်သည်။ သန္ဓေသားခလေးဖျက်ချရာတွင် ဒေါက်တာဘေဆင်မှာ အလွန်ဆေးလိုက်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ဓာတ်သိများကမူ သူ့အား ဒေါက်တာဘေဆင်ဟုမခေါ်ကြဘဲ ဂေါ်လီဘေဆင်ဟုသာ ခေါ်ကြလေ၏။ ဒေါက်တာဘေဆင်ခေါ် ဂေါ်လီဘေဆင်သည် မုဆိုးမ တစ်ခုလပ် မဆိုထားနှင့် လင်ရှိယောက်ျား မိန်းမများကိုလဲ အချောင်ရလျှင်ရသလို ဝါးမြိုစားသောက်နေကျ ကြောင်ဘားကြီးတစ်ကောင်ပင်တည်း။ ပွင့်တစ်ယောက် ကိုသံဒိုင်နှင့် လူသိရှင်ကြား လက်ထပ်ခြင်းမပြုရသေးမီ ဗိုက်ကြီးမည်ကိုစိုး၏။ ထို့ကြောင့်လဲ ဂေါ်လီဘေဆင်နှင့် အရဲစွန့်ပြီး လာတွေ့ရခြင်းပင် ဖြစ်လေသည်။
`အေးဗျာ.. ခက်တော့.. ခက်သား´ ဒါ သူရွတ်နေကျ စကားလုံးသာဖြစ်၏။ ထိုစကားအဆုံး၌ ဟန်ပါပါနှင့် နားကြပ်ကို စားပွဲပေါ်မှာဆွဲယူပြီး အကူနပ်စ်မလေးအား..။ `ဆေးခန်း ခဏပိတ်ထားမယ်နော်´ `ဟုတ်ကဲ့ပါ ဒေါက်တာ´ လှပတောင့်တင်းသော တင်ရင်ခါး အချိုးညီညီလှပသော ပွင့်ကဲ့သို့သောလူနာများလာလျှင် ဒေါက်တာဘေဆင် သည်သို့ပင်ဆေးခန်းကို ယာယီရပ်ထားလေ့ရှိသည်မှာကြပြီ။ နပ်စ်မလေးကိုယ်တိုင်လည်း နပ်ဆင်းအောင်လက်မှတ်ရ ဆရာမမဟုတ်။ ဖင်ကြည့်ပြီးခန့်ထးသော အကူဆရာမဖြစ်သည်မို့ ဘေဆင်၏ စောက်ကျင့်ကို နပ်ပြီးသားပင်။ ဆရာမလေးက ပွင့်ကို အားပေးသလိုပြုံးပြပြီး ဆေးခန်းတံခါးမကြီးကို ဆွဲစေ့လိုက်သည်။ `ကဲ.. ပွင့်.. အဲဒီကုတင်မှာ လှဲလိုက်၊ ကျုပ်က လူရင်းတွေမို့သာလုပ်ပေးတာနော။´ `ကျေးဇူးပါပဲ.. ဒေါက်တာရယ်´ ပွင့်က အနီးရှိစားပွဲလေးပေါ်သို့ လက်ထဲတွင်ကိုင်လာသော လက်ပွေ့အိတ်နှင့် ခေါက်ထီးလေးကို တင်လိုက်ပြီး ကုတင်ပေါ်လှဲချလိုက်သည်။ `မျက်စေ့မှိတ်ထားနော်.. ပွင့်´ `ဟုတ်ကဲ့.. ဒေါက်တာ´ `ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ထောင်ထား..ဟုတ်ပီ… နဲနဲ.. နဲနဲလေး ကားလိုက် အဲ.. အိုကေပြီ´ ပွင့်မျက်စေ့မှိတ်ထားပါသည်။ ဒေါက်တာဘေဆင်၏လက်ညှိုးတစ်ချောင်းက ခပ်ဟဟဖြစ်နေသော ပွင့်စောက်ခေါင်းထဲသို့ ထိုးမွှေလိုက်သည်။ `အ.. အဟင့်.. ယားတယ်. ဒေါက်တာ´ `ဟို.. အချောင်းကြီးကျတော့ မယားဘူးလား´ `အို.. ဒေါက်တာကလဲ.. အဟင့်ဟင့်.´ စောက်ပတ်အတွင်းပိုင်းသို့ တစ်မိနစ်ခန့်မွှေလိုက်သောအခါ ချွဲကျိသောစောက်ရေများ စိုကျလာ၏။ ဒေါက်တာဘေဆင်က မျက်စေ့လေးမှိတ်၍ငြိမ်နေသော ပွင့်၏လှပသောမျက်နှာလေးကို တစ်ချက်ကြည့်ပြီး သူ့ဘောင်းဘီရှည်ကြီးကို ချွတ်လိုက်သည်။ ထိုအခါ နီကြောင်ကြောင်လီးမွှေးကြီးများကြားမှ ဂေါ်လီသီးများ အစီအရီခွဲစိပ်ထည့်သွင်းထားသော ပြောင်းဖူးသဏ္ဍာန်လီးတန်ကြီးမှာ ငွါးငွါးစွင့်စွင့်ကြီး ထွက်ပေါ်လာပါတော့သည်။ ဂေါ်လီ လီးကြီးထိပ်က အတန်ငယ်လုံးပြီး ကွမ်းသီခေါင်းကြီးမှာ လုံးဝင်းစိုလက်နေ၏။ ပွင့်မှာ ချိုးချိုးချွတ်ချွတ်အသံ၊ အ၀တ်ချင်းထိခိုက်သံတွေကြားပြီးမှ စောက်ခေါင်းထဲသို့ နွေးထွေးမာကျောသော အရာကြီးတစ်ခုထိုးသွင်းလိုက်သည်ကို ခံစားလိုက်ရသည်။
ပွင့်စိတ်ထဲ၌ ခလေးဖျက်ချသော ကိရိယာတို့မည်သည်မှာ ယောက်ျားလီးကဲ့သို့ပါပဲလားဟု မှတ်ယူလိုက်မကာ အသာမှိန်း၍ နေလိုက်သည်။ ကုတင်အောက်မှ မတ်တပ်ရပ်၍ ဒူးထောင်ပေါင်ကားထားသော ပွင့်၏ဆူဖြိုးမောက်ကြွားနေသည့် စောက်ဖုတ်ကြီးထဲသို့ ဂေါ်လီလီးကြီးကို တရစ်ပြီးတစ်ရစ်ထိုးသွင်းနေသော မစ္စတာဘေဆင်၏ လက်နှစ်ဖက်မှာ ကုတင်စောင်းကိုသာ ကိုင်ထားပြီး အခြားဘာနှင့်မျှမထိရအောင် သတိနှင့် သွင်းထည့်လိုက်သည်။ `ဗြွတ်..ဘွပ်´ `အ.. အား.. ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်´ `နာလို့လား.. ပွင့်´ `နာတာမဟုတ်ဘူး… တစ်မျိုးကြီးမို့ပါ´ `ဒါက နောက်ဆုံးပေါ်ခလေးဖျက်ချတဲ့ အတန်လေပွင့်ရဲ့၊ သိပ်လဲမနာဘူးမဟုတ်ာလား´ `အင်း.. ကြပ်တော့.. ကြပ်တယ်ဒေါက်တာ´ `ကြပ်မှ ခံလို့ကောင်းမှာပေ့ါ ပွင့်ရဲ့ မှုတ်ဖူးလား´ `အဟင့်.. ဒေါက်တာကလဲ.. အဟင့် ကျွတ်´ ဂေါ်လီးသီးကြီးများက ပွင့်စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားများကို ပွတ်တိုက်လျောဆင်းနေကြရာ ပွင့်မှာ တဖြေးဖြေး တွန့်လိမ်လာမိလေ၏။ `ဒေါက်တာဟာကြီးက တစ်မျိုးပဲကွယ်´ `ဟိုဟာနဲ့တူတယ်.. မို့လား.. ဟင်´ `အင်း.. အစိအစိတွေပါတာတစ်ခုပဲ သိလား´ `ဟုတ်တယ်ပွင့်ရဲ့ ဒါနဲ့ထိုးချပေးလိုက်ရင် ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ လုပ်နေရသလိုပဲ အရသာရှိပြီး ခလေးလဲပျက်ကျရောလေ ဟဲဟဲဟဲ´ `အင့်.. အင်းး.. အင်း.. ရှီး ကျွတ်ကျွတ်´ ပွင့်က နှုတ်ခမ်းလေးကိုက်ပြီး လက်နှစ်ဖက်က ကုတင်ဘောင်ကိုဆုပ်ကိုင်ထားကာ မျက်စိကိုတွင်တွင်ကြီး မှိတ်ထားဆဲပင်။ `ပြွတ်ဘွပ်.. ပြွတ်ဘွပ်.. ပြွတ်ဘွပ်´ `အလာလာ.. အလာလာ.. ကျွတ်´ `နာရင်.. နာတယ်.. ကောင်းရင်ကောင်းတယ်ပြောနော်.. ပွင့်သိလား´ `ကောင်ပါတယ်.. ဒေါက်တာ´ `အဆုံထိရောပွင့်.. ၀င်ရဲ့လားဟင်´ `ဟုတ်.. ဟုတ်ကဲ့ ၀င်ပါတယ်.. အား´ ဒေါက်တာဘေဆင်က ချွန်မြသောနှာခေါင်းကြီးနီလာပြီး တဖြေးဖြေးအရှိန်တက်လာက အသွင်းအထုတ် ခပ်သွက်သွက်လေးလှုပ်ရှားလာတော့၏။
`ပြွတ်.. ပြွတ်.. ပြွတ်..ပြွတ်.. ပြွတ်´ `အင့်.. အင့်.. အင့်.. အင့်.. အင်း´ ပွင့်တစ်ကိုယ်လုံး ငလျင်လှုပ်သလိုရှေ့တိုးနောက်ငင်ခါရမ်းနေသည်။ ကုတင်ကြီးမှာလဲ သိသိသာသာကြီး လှုပ်ခါလာသည်။ `ပြွတ်..ဖပ်..ဖပ်.. ပြွတ်…ပြွတ်´ `အား.. အား.. အား.. ရှီး…ကျွတ်ကျွတ်.. ကျွတ် ဒေါက်တာဟာကြီးက ယောက်ျားနဲ့ လုပ်နေသလိုပဲနော်´ `ခံလို့ကောင်းတယ်မို့လား ပွင့်´ `ဟုတ်ကဲ့.. အင့်.. အိ.. အင့်.. အင့်..´ `မျက်စေ့မဖွင့်နဲ့နော်.. လန့်သွားမှာစိုလို့ သတိပေးထားတာပါ´ `ဟုတ်ကဲ့ မဖွင့်ပါဘူး ဒေါက်တာ´ `ပြွတ်.. ဘွပ်.. ဘွပ်.. ပြစ်ပြစ်ပြွတ်´ `အင့်.. အင့်.. အင့်.. အ.. အား အား´ ပွင့်ခြေထောက်များ အစွမ်းကုန်ထားသွားသည်။ စောက်စိကြီးက ငေါက်တောက်ကြီးပြူးထွက်လာကြရာ ဂေါ်လီသီးကြီးများနှင့် ဒါးချင်ယှဉ်ခုတ်နေသည့်အလား အသွားအပြန်တိုက်မိကြလေရာ ပွင့်မှာ အရာသအရှိကြီး ရှိရှိ သွားပြီး ထိုသားဖက်ကိရိယာကြီးကို မည်မျှပင်ပေးရပေးရ ၀ယ်ယူသွားရန်စဉ်းစားမိလေသည်။ `ပွင့် ထွက်ခါနီးပလားဟင်´ `အင်း.. ဟုတ်တယ်.. ပြီးချင်နေပြီ ဒေါက်တာ´ `ပွင့် ခွင့်ပြုနော်.. အမောပြေအောင် ဆရာကအသာလေး အပေါ်က ဖိအိပ်ပေးထားမယ်´ `ရပါတယ် ဒေါက်တာ´ ဥာဏ်များသော မစ္စတာဘေဆင်က ပွင့်စောက်ခေါင်းအတွင်းသို့ လီးကြီးကို အဆုံးဖီသွင်းပြီး အားရပါးရကြီး ဆောင့်လိုးပြီး ပွင့်နို့ကြီးနှစ်လုံးပေါ်သို့ မျက်နှာကြီးအပ်ခါ မှောက်အိပ်ချလိုက်တော့သည်။ လီးနှင့် စောက်ပတ်က တင်းကြပ်စွာပူးကပ်နေဆဲမှာပင် တင်းကနဲ့ တင်းကနဲ့ အရှိန်မသေသေးဘဲ ရုန်းကန်နေကြလေသေးသည်။ ဒေါက်တာဘေဆင်က လီးတန်ကြီးကို အသာအယာဆွဲချွတ်လိုက်ပြီး ပွင့်စောက်ပတ်ကို ဖြဲကြည့်လိုကသည်။ ဟစိ ဟစိနှင့် အရှိန်မသေသေးချေ။ `ပွင့်က ညှပ်အား တော်တော်ကောင်းတာဘဲ´ `ရှင် ဘာညှပ်အားလဲ ဒေါက်တာ´ `အော် ကြွက်သားတွေက သိပ်သန်စွမ်းတယ်လို့ ကရိယာကို မနဲကြီး ဆွဲထုတ်ရာမယ်´ `အဟင်း.. ပွင့်ောတ့ ဘာမှမသိဘူး´ `ကဲ စိတ်ချသွားရပါပြီ ပွင့်၊ အဲ ပြီးတော့ ဆရာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ဘယ်ယောက်ျားနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ပွင့်အိပ်နိုင်ပါတယ်ပွင့် ခလေးရစရာ အကြောင်းမရှိတော့ပါဘူး။
´ `ဘာဖြစ်လို့လဲ ဒေါက်တာ´ `ပွင့်သားအိမ်ကို အပြီးထိုးခွဲပြစ်လိုက်လို့ပါ´ `ရှင်.. ဟုတ်လား.. သိပ်မနာပါလား´ `ကိရိယာ.. ကောင်းလို့ပေ့ါပွင့်ရဲ့´ `ဒေါက်တာကိရိယာကို ပွင့်ခဏကြည့်ပါရစေ´ `ဟာ ဒါ နောက်ဆုံးပေါ်ကိရိယာ ပွင့်ရဲ့ ဟဲဟဲ အခုပဲ ရေခဲဗူးထဲထည့်ပြီး သိမ်းလိုက်ပြီလေပွင့် လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ လာခဲ့အုံးပေ့ါ´ `ဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာ အခုလဲ မေမြို့က အပြန်မှ ရန်ကုန်ကိုတန်းမဆင်းသေးပဲ ဒေါက်တာဆီဝင်လာတာ နောက်လဲကြုံမှာပါ´ ပွင့်က ထမီပြင်ဝတ်စဉ် ပေါင်ကြားသို့ မစ္စတာဘေဆင်၏ လရေများစီးကျလာသည်။ `ပွင့် ရေချိုးခန်းခဏသွားချင်တယ် ဒေါက်တာ´ `သွားလေပွင့် ဒီတံခါးဖွင့်ဝင်သွား´ ပွင့်ရေချိုးခန်းထဲဝင်ပြီး ထမီကိုလှန်ကာ စောက်ပတ်ကိုဖြဲပြီး ရေသုံးလေးခွက်ပက်သွင်းလိုက်ရာ သွေးစ သွေးနေလေးများနှင့် အဖြူဖက်များ ကျဆင်းလာသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ သူ့ကိရိယာက ခံလို့ကောင်းသာဟု စိတ်ထဲကတွေးမိရင် အပြင်ထွက်လာခဲ့သည်။ `ဘယ်လောက်ကျလဲ ဒေါက်တာ´ `မိတ်ဆွေရင်းတွေပဲ ငွေကြေးစကားမပြောပါနဲ့ ပွင့်ရယ်၊ ကြုံရင်လည်း ၀င်ခဲ့နော်၊ နောက်တစ်ခါစမ်းသပ်ရအောင်´ `စိတ်ချပါဒေါက်တာရဲ့ ကျမကလဲ အဲဒီကိရိယာကို လေ့လာချင်သေးတာပါ ကဲ သွားမယ်နော်´ `အိုကေ ဂွတ်ဘိုင်´ မြန်မာပြည်ရောက် မစ္စတာဘေဆင်လို အပ်ပုန်းတွေနှင့် ပွင့်တို့လို မလည်မရှုပ်မလေးတွေ မည်မျှရှိနေမည်းကို မည်သူမျှမသိနိုင် ကြလေပါတကား ……… ပြီးပါပြီ။